Ukuhlala kamnandi kunye neKabani Canoeing & Forest Trekking
Mullenkolly, Kerala, India
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVoye
I-VOYE HOMES I-Wayanadan Holiday Home yindawo yokulala eyi-05 eneNkonzo ye-APT efumaneka e-Mullenkolly, e-Kerala. Ukuhamba nge-Padri Reserve Forest usuka eSulthan Bathery-Pulppally ukufikelela kwipropathi ngamava angenakulibaleka.Olu iya kuba lolona khetho lufanelekileyo kumbono "woMsebenzi osuka eKhaya". Ungabona izilwanyana zasendle xa kuhanjwa ngehlathi, kwiindawo zokuhlala zezizwe kunye namahlathi ashinyeneyo aluhlaza.Eminye imisetyenzana ibe kukubukela iintaka, uhambo olude,iKabani River Canoeing & Natural Stream Bath.Eyona ndawo ifanelekileyo yohambo lweQela.
Ngaba ujonge indawo ehambelana "noMsebenzi osuka eKhaya", oku kuya kuba lukhetho oluLungileyo. Kwabo banqwenela ukuba banye nendalo, le yeyona ndawo ifanelekileyo… izolile… izolile… ibukeka… ithatha umoya… nokuba ungawaphi amagama amagama owuchazayo ukuyichaza, awunakwenza ubulungisa kwiSerene woods de ube uzibonele ngokwakho. Ukuba ukhangela indawo egqibeleleyo yokuPhuma kweQela okanye Hlanganani, ewe le iya kuba yeyona ilungileyo.
IMullenkolly yilali encinci eWayanad, kufutshane nePadri Reserve Forest eyabelana ngebhoda nomlambo iKabani kunye neKarnataka. IMullenkolly inokufikelelwa nge-Sulthan Bathery a- Pulpally route okanye ibhulorho ye-bu Bavli chekadi. Isiqithi saseKuruva, itempile yaseThirunelli, i-Chethalayalm Falls kunye nomlambo waseKabani zezona zikhangayo ezikufutshane.
I-Mullenkolly (0.02 km)
Umlambo waseKabani (2.90 km)
I-Kattikkulam (20.00 km)
Isiqithi saseKuruva (23.00 km)
Iingxangxasi zaseChethalayam (23.00km)
Irumpupalam, Tholpetty (26.00 Km)
Begure Reserve Forest, Karnataka (27 km)
Itempile yaseThirunelli (35.00 km)
Brahmagiri (37.05 km)
I-Mupanga National Park (44.05 km)
Iingxangxasi zase-Iruppu (49.00 km)
AMAKHAYA EVOYE IKhaya leHolide laseWayanadan Libekwe kwiikhilomitha nje ezintathu ukusuka eMullenkolly, ezinye zezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi kunye neendawo zokutyela zikumgama wokuhamba kule ndawo. IMullenkolly yilali encinci eWayanad, kufutshane nePadri Reserve Forest eyabelana ngebhoda nomlambo iKabani kunye neKarnataka. IMullenkolly inokufikelelwa nge-Sulthan Bathery a- Pulpally route okanye ibhulorho ye-bu Bavli chekadi. Isiqithi saseKuruva, itempile yaseThirunelli, i-Chethalayalm Falls kunye nomlambo waseKabani zezona zikhangayo ezikufutshane.
Kuya kubakho omnye womnakekeli wethu okhoyo kwipropathi ukuze akuncede ngeemfuno zakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Siyakuqinisekisa ngeholide emnandi nehlala ixabisekile apha.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 12:00 - 18:00